SEO PowerSuite: 5 Inokurumidza Nzira dzeKutora Mhedzisiro yeVane Bhazi Saiti Varidzi Martech Zone
Mugovera, June 18, 2016 Muvhuro, October 18, 2021 Aleh Barysevich
Dhijitari kushambadzira chikamu chekushambadzira chausingakwanise kuregeredza - uye panotangira pane SEO. Iwe ungangove uchiziva nezve maitiro anogona kuita yakanaka SEO zano pane yako brand, asi semushambadzi kana saiti muridzi, yako tarisiro inowanzo kuve kumwe kunhu, uye kuita SEO chinowirirana kukoshesa kunogona kuoma. Mhinduro ndeye kushandisa dhijitari kushambadzira software inochinjika, kugona-kupfuma, uye inoshanda zvakanyanya.
pinda SEO PowerSuite - yakazara repertoire yezvishandiso zvakagadzirirwa kuwedzera yako SEO. Mune ino posvo, isu ticharatidza nzira shanu dzaungashandisa SEO PowerSuite kusimudzira yako brand SEO.
Ita shuwa kuti Unowanikwa
Kana iwe uchida kuti yako saiti iverengerwe uye iverengerwe zvinobudirira, zvakakosha kuti zviite sezviri nyore sezvinobvira kuti Google ikwire saiti yako uye iwane zvirimo. Uine izvo mupfungwa, chimiro chesaiti chinotamba chinzvimbo chakakosha pakurongedza. Zvirinyore, mawebhusaiti ane mamiriro ane musoro ari nyore kune injini dzekutsvaga kukambaira uye chinzvimbo.
Uchishandisa SEO PowerSuite, unogona kuona kunaka kwechimiro chesaiti yako. Zvinhu zvakasiyana zvinouya mukutamba - semuenzaniso, akakosha mapeji anofanirwa kuwanikwa kubva kumba peji, uye mablog mablog anofanirwa kubatana pakati pavo kana aine mamiriro. Unogona kushandisa SEO PowerSuite's WebSite Auditor kutarisa zvinhu zvakadaro.
Ingo enda kune WebSite Auditor chishandiso, uye tinya pane iyo Pages chikamu. Wobva watarisa iyo Yemukati Zvinongedzo Kune Peji ikholamu kuti uone kuti ndeapi mapeji pane yako saiti asina zvinongedzo zvemukati zvinongedzera kwavari.
Izvi zvinonyanya kukupa iwe unokwanisa kutora runyorwa rwezvinyorwa uye mapeji ayo iwe aunofanirwa kutsvaga nzira dzekubatanidza kune kubva kune dzimwe nzvimbo dzesaiti yako.
Tarisa Kuti Yako Yakakosha Webhu Mapeji Anotakura nekukurumidza Zvakaringana
Webhusaiti kumhanya kune kwakakura kukanganisa pachigaro nekuda kwezvikonzero zviviri:
Saiti yekumhanyisa chinhu chinzvimbo, zvichireva kunonoka mawebhusaiti kazhinji chinzvimbo chakaderera.
Kumhanya kwako saiti kune mhedzisiro yakanangana nehuremu hwebhuremu
Google uye mamwe mainjini ekutsvaga anoisa chakakura kukosha pane anoshandisa ruzivo masaini. Imwe yeakadai chiratidzo ndeye bounce rate, iyo inogona kukanganisika nekukasira kwewebhusaiti - vanhu vazhinji vanongomirira mashoma masekondi (kunyanya) kuti saiti itakure vasati vabhabha.
Uchishandisa WebSite Auditor, unogona kuona kuti ndeapi mapeji ari pawebhusaiti yako ari kurodha zvishoma. Shanyira iyo Peji Kuongorora module yeWebhusaiti yeWebhu Yekuongorora, uye tarisa iyo peji yekumhanyisa chikamu kuti uone kana ako mapeji achipasa Google yekumhanyisa bvunzo.
Paunenge iwe waona kuti ndeapi mapeji anotakura zvishoma nezvishoma, unogona kutora matanho ekugadzirisa izvo zvinhu.
Tarisa Chinongedzo Chirango Njodzi
Yakaderera-mhando zvinongedzo zvinogona kuisa yako saiti panjodzi yeGoogle chirango, icho maererano neSEO, ndiyo yako yakaipa kwazvo hope. Kana iwe uchida kudzivirira chirango kubva kuGoogle, unofanirwa kukwanisa kuona zvinokuvadza zvinongedzo uye kutora matanho ekuzvidzikisira.
ne SEO PowerSuite's SEO SpyGlass, iwe unokwanisa kuona otomatiki zvinongedzo zvinokuvadza mune yako backlink mbiri uye kudzivirira Google's link zvirango.
Zvese zvaunoda kuti uite kuenda kune iyo SEO SpyGlass chishandiso uye isa yako saiti domain. Wobva waenda kuLink Penalty tebhu wobva wadzvanya paRedlinks chikamu, chinowanikwa kuruboshwe. Ikoko, iwe unowana mukana kune kuwanda kwezviitiko zvakakosha, kusanganisira iyo 'chirango njodzi' kune yako yese domeini.
Pazasi pekuedzwa kwekukurumidza kweiyo Martech Zone. Sezvauri kuona, hapana chero njodzi yePenalty, yaita zvakanaka!
Zvakanakisisa pane zvese, iwe unogona kutarisa iyo njodzi yekukanganisa kwehukama hwako mune kamwe chete kubaya. Nekudaro, kunyangwe iri yemunhu link kana boka remashure backs, iwe unogona kuona yako chirango njodzi pakubata kwebhatani.
Mhanya Yenhare Yehukama Bvunzo
Sezvo kutsvagurudza nhare kuchitanga kuenderana nenhamba yekutsvaga kwedesktop, hushamwari hushamwari hwave iko zvino chinzvimbo chidiki cheGoogle uye zvimwe zvinotsvaga. Mune mamwe mazwi, kana yako saiti isina kugadzirirwa nhare, inogona kukanganisa chinzvimbo chako (tisingataure nezve ruzivo rwevashandisi).
Unogona kushandisa WebSite Auditor kuita mobile-hushamwari bvunzo pane yako webhusaiti, kutarisa kana ichipfuura zviyero zveGoogle. Kana yako saiti ikasapasa bvunzo, iwe unowana matipi ekuti ungaite sei kuti saiti yako ive nhare-yakagadziridzwa - semuenzaniso, muverengi haafanire kuswededza mukati kana kupururudza kuyambuka pane yavo nharembozha kuti averenge zvemukati peji rako.
Enda kune Saiti Kuongorora chikamu cheWebhusaiti Yekuongorora Webhusaiti yekutarisa yako saiti.
Kana yako saiti isina zvibodzwa zvakanaka, mhinduro ingangodaro ndeyekugadzirisa patsva webhusaiti yako kuti ive inoteerera (kana isati yatove). Investment mukugadzira - kunyanya nhare-inoshamwaridzika dhizaini - inogona kubhadhara mibairo mumhedzisiro yeSEO.
Ita Ongororo yeSiti
Panogona kuve nenyaya dzakakomba newebhusaiti yako yausingazive, kana usina nguva yekuzviongorora. Izvi zvinogona kukanganisa masimba esiti yako uye chinzvimbo. Ne SEO PowerSuite, iwe unokwanisa kuwana maturusi, senge Saiti Kuongorora chishandiso, icho chinga nongedze otomatiki chero akakosha nyaya newebsite yako.
Kuti uite yakazara saiti odhita, vhura iyo WebSite Auditor app, uye tanga kuongorora webhusaiti yako uchishandisa iyo Saiti Kuongorora chida:
Ichi chishandiso chinozvionera wega chero hunyanzvi nyaya dzinogona kudzikisa masosi ako, inokudzidzisa iwe kugadzirisa nyaya, uye inokuzivisa iwe nezve chero pa-peji matambudziko. Izvo zvinhu zvine simba zvine simba.
SEO ine hukuru hwakakura pane yako brand kuti zvakaoma kufuratira. Nekudaro, kana iwe uchinetseka kukoshesa yako SEO mushandirapamwe, tarisa SEO PowerSuite arsenal yezvishandiso zvinoshanda.
Ivo vanofambisa maitiro eSEO, zvichiita kuti zvive nyore kwazvo uye nekukurumidza kuti iwe uone chero nyaya dzinogona kuve newebsite yako, uye pakupedzisira dzinogona kukubatsira iwe kuwedzera yako saiti saiti.
Uchishandisa SEO PowerSuite, unogona
Ita shuwa kuti yako saiti iri yakanyatsogadziriswa
Tarisa kuti yako webhusaiti mitoro nekukurumidza
Tarisa yako saiti backlink chirango njodzi
Runha a mobile hushamwari bvunzo
Kuita kunze a yakazara saiti odhita
Muchokwadi isu tangobata muromo wenyuti yechando muchinyorwa chino, asi zviri pamusoro zvinofanirwa kukwana kuti iwe uenderere mberi! Unogona download SEO PowerSuite yemahara pawebhusaiti yedu yepamutemo.
Dhawunirodha SEO PowerSuite Yemahara!
kuburitsa: Martech Zone iri kushandisa yayo SEO Powersuite affiliate link mune ino chinyorwa.
Tags: backlink odhitabacklink chirango njodzibatanidza njodzimobile hushamwarinharembozha bvunzomasimbaSearch Engine Optimizationseoseo mushandirapamweseo masimbachimirosaiti odhitawebhusaiti odhitakukurumidza kwewebsite
Maitiro Ekumisikidza Yako Youtube Chiteshi uye Kuipwanya!
Jun 26, 2016 pa 11: 25 PM
Ndima yekutanga inorova chaizvo. Varidzi vemabhizinesi vari mushishi kumhanyisa bhizinesi uye vatengesi vakabatikana nekuchengetedza mabhizinesi aya. Vese vane zvinhu zvekukurumidzira zvekuenda kune kazhinji kwete kukoshesa SEO. Kutarisa pazviri zvinonetsa uye nzira idzi dzawakagovera dzinobatsira chaizvo kune avo vakangogovera nguva shoma yeSEO asi vachiri kuda mazwi avo akakosha padanho rekutanga.
Kungosimbisa kukosha kwakaita nguva yekurodha, kana vanhu vadzvanya chinongedzo, vanomirira masekonzi mashanu kuti peji riratidzike zvakanaka vasati vadzvanya bhatani rekumashure pabrowser yavo uye vachiedza rombo ravo neimwe mhinduro yekutsvaga! Chengetedza saiti yako iri nyore sezvinobvira uye Flash-isina!